Iti ye-Chamomile, Izibonelelo kunye nendlela yokuyisebenzisa Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
I-Chamomile ithathelwe ingqalelo njengomfuno wokutholisa iinkulungwane. Ukwenza iti, iintyatyambo zesityalo zomile kwaye zigalelwe ngamanzi ashushu.
Yeyona ndlela ilungileyo xa usiya kwiitayi ezikunceda uphumle ngcono. Izakha mzimba zidibene nendalo, ukuthomalalisa ukuphakama okunceda ukuthoba isantya ekupheleni kosuku oluxakekileyo.
1 Izibonelelo zeChamomile
1.1 Iipropati ezichasayo
1.2 Ukunciphisa iintlungu zokuya exesheni
1.3 Ukukhuselwa kwiintlobo ezithile zomhlaza
1.4 Uxinzelelo loxinzelelo
2 Ngaba iti ye-chamomile ikunceda ulale?
I-Chamomile yinto enamandla yokulwa nokuvuvukala, ngenxa yoluhlu olude lweemichiza kunye ne-antioxidants ekubunjweni kwayo. Ukunciphisa ukudumba kuthetha umngcipheko omncinci weentlungu zesisu, isifo samathambo, ukuphazamiseka komzimba, ukudakumba, kunye nezinye iingxaki zempilo ezingapheliyo.
Ukunciphisa iintlungu zokuya exesheni
Olunye uphando lubonakalisile ukuba le teyi inokunceda ekuthomaliseni ukuxilana exesheni kwabasetyhini. Ukongeza, abaseli beeti baphinde banika ingxelo yokuncipha koxinzelelo kunye noxinzelelo olunxulunyaniswa nentlungu yokuya exesheni.
Ukukhuselwa kwiintlobo ezithile zomhlaza
Isifundo esivela kwiYunivesithi yaseAthene, eGrisi, safumanisa ukuba ukusetyenziswa kwemihla ngemihla kweti ye-chamomile iminyaka eliqela kunxulunyaniswa nomngcipheko omncinci womhlaza wedlala lengqula. Nangona kusekutsha kakhulu ukuba ithi iti ye-chamomile inceda ukuthintela umhlaza, uphando lubonisa ukuba ukusetyenziswa ngokungagungqiyo ekuhambeni kwexesha kunokuba sisitshixo sokhuseleko.
Ngombulelo kwiipropathi zayo zokuthomalalisa kunye nokukwazi kwayo ukulwa nokuphuthelwa, kunokuba sisifo esisebenzayo kunye noxinzelelo lokunciphisa uxinzelelo. Iti ye-Chamomile (kunye nevumba layo lokuphumla) inokusetyenziselwa ukuthambisa indalo kwindawo yokuhlambela yokuphumla okanye yokuthambisa. Inokukunceda ukunciphisa iintlungu kunye nokwandisa ukujikeleza.
Ngaba iti ye-chamomile ikunceda ulale?